Famotsoran-keloka : nandroso soso-kevitra hialàna amin'ny fisian'ny tsimatimanota ny MFM
Fivoriana fanintelony niarahan'ireo vondrona parlemantera ao anatin'ny SPDUN ka nanasany filohan'antoko pôlitika maherin'ny roapolo no notanterahina teny amin'ny Panorama, ny zoma lasa teo.
Raha somary tsy lanin'ny vavonin'ny antoko pôlitika sasantsasany ny fampihavanam-pirenena ka voatery najanona, dia niompanan'ny adihevitra kosa ny famotsoran-keloka. Resahina ao anatin'izany ny hoe: iza amin'ireo sokajin'olona samihafa tafiditra amin'ny raharaha 2002 no tokony homena ? Eo aloha dia efa nandeha ny adihevitra fa tsy tokony homena ny nanapaka tetezana sy ny namono olona. Adihevitra ihany koa ny hoe: Raha atao àry izany ny famotsoran-keloka, dia misy ny tsimatimanota satria i anona...anie ka niharihary fa nandratra na nanimba ny fananan'ianona.
Olana hafa mifaningotra amin'izany ihany koa ny hoe: tsy ho azo tanterahina anie izany ny famotsoran-keloka raha tsy vita avokoa ny fitsarana ny raharaha rehetra tamin'ireny vanim-potoanan'ny krizy ireny, satria tsy maintsy fantatra mialoha ny sazy. Mba hialàna amin'ireo santionan'olana vitsivitsy notanisaina etsy ambony ireo dia soso-kevitra no naroson'ny MFM, tamin'ny alalan'ny Filoha nasionaliny, dia ny fampiharana ny "principe de réparation civile", izany hoe: izay olona rehetra nanam-boina tamin'ireny fotoan-tsarotra ireny dia mahazo mitory avokoa.
Raha fintinina amin'ny teny fohy io, ny fampiharana io foto-kevitra io, araka ny fanazavan'ny Filoha nasionalin'ny MFM ihany, dia toy izao: raha ny fanjakana no toriana amin'ilay voina nitranga dia any amin'ny Fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana (Tribunal Administratif ) no apetraka ny fitoriana. Raha olon-tsotra kosa no tafiditra ao anatin'ilay raharaha, dia ny "Tribunal de Droit commun" no misahana izany. Ny Fitsarana amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy milaza ho tsy mahefa (incompétent) amin'ny raharaha rehetra mikasika resaka pôlitika. Miainga amin'io soso-kevitra io dia mbola afaka mametraka fitoriana izany ireo rehetra nahatsiaro ho niharam-boina ary tokony hanao izany mialohan'ny hivoahan'izay lalàna vaovao hirakitra ny famotsoran-keloka holaniana eny anivon'ny Antenimiera izay.
Araka ny fanamarihan'Ing. Manandafy Rakotonirina, dia nandritra ny fivoriana voalohan'ny SPDUN, ny 4 marsa lasa teo, no efa nandroso io soso-kevitra io ny MFM. Amin'ny 03 avrily ho avy izao, araka ny nambaran'io mpanao pôlitika io ihany, ny fivoriana fahatelo ka andrasana izay zava-baovao mety havoakan'ny fikaonan-dohan'ireo mpanao pôlitika izay azo lazaina fa efa manana ny traikefany avy, indrindra fa mafampana tato ho ato ny raharaham-pirenena. Ny Filoha nasionalin'ny MFM moa, nandritra ny resaka manokana nifanaovan'ny mpanao gazety taminy, dia nahitsy nilaza fa raha tanteraka araka ny tokony ho izy ny famotsoran-keloka, dia hangina satria tsy hanan-kambara intsony ny CRN tarihin'ny Profesora Zafy Albert sy ny Arema miaraka aminy.
05-04-2004 / 10:11